Goorma ayay dib u bilaaban doonaan hawlaha shaqo ee golaha shacabka oo fasax kooban ku jiray? – Kalfadhi
Shuruuc & Hindise-Sharci
Goorma ayay dib u bilaaban doonaan hawlaha shaqo ee golaha shacabka oo fasax kooban ku jiray?
by Cabdiraxmaan Maxamed
in Baarlamaanka, Warar
Kulamadii Kalfadhiga shannaad ee baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sii baaqan doona, xili uu goluhu fasax ku maqnaa inta badan tobankii dambe ee Ramadaan iyo maalmahan Ciidda.
Kulan ay maanta yeesheen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa looga hadlay wakhtiga ay dib u furmayaan kulamada Kalfadhiga iyo shaqooyinka golaha.
Waxay guddigu isku raaceen in sabtida oo ku beegan 15ka Juun uu kalfadhigu dib u furmo, sida uu warbaahinta Kalfadhi u xaqiijiyey Xildhibaan Cali Jawhar oo xubin ka ah guddiga.
Xildhibaanku wuxuu sheegay in aad loo lafa-guray sida loo wajihi doono hawlaha horyaal golaha, waxayna isku raaceen guddigu in loo kala hormariyo sida ay u kala muhiimsan yihiin.
Hawlo u badan doodo iyo ansixin sharciyo ayaa horyaal golaha shacabka inta lagu jiro Kalfadhigan. Mudadii Kalfadhigii hore ayaa wakhti badan golaha kaga lumay khilaafaad siyaasi ah oo ka dhex jiray golaha iyo mid uga imanayay bannaanka.
Xildhibaan Sakariye “Kenya waa in markeeda lagu sameeyaa dhibaatada ay nagu heyso si loo dareensiiyo”
Gudoomiyaha golaha shacabka oo la kulmay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka oo qaabilay guddigii kiiska badda
Xildhibaan sheegay in uu maxkamad la tiigsan doono wasiirka arrimaha dibadda, kana tashan doonaan aayahooda
Saraakiil ciidan oo loo furay tababar ku saabsan sugida amniga doorshada Golaha Shacabka
Baarlamaanka Puntland oo diyaar-garow ugu jira furitaanka kalfadhiga 49-aad
Tweets by @kalfadhi_SO
FALANQEYNTA SHARCIGA JINSIGA
Ku soo dhawoow bogga ee Kalfadhi.com oo ah madal warbaahin oo madaxbannaan oo tebineysa arrimaha baarlamaanka iyo dowlad-wanaagga. Waxaad ka daawan kartaa kulamada, doodaha iyo shirarka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka ah.
Warbaahinta & Dowladda
Shuruuc iyo Hindise-Sharci
Archives Select Month October 2021 (31) September 2021 (40) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)
© 2021 Kalfadhi.com